Ònye bụ Martin Vrijland?
Ọnye na-bụ Martin Vrijland na gịnị mere o ji ede edemede? Martin Vrijland bụ onye odeakụkọ, onye edemede na onye nyocha nke nwere nnukwu weebụsaịtị na Netherlands ugbu a maka onye na-achọ eziokwu n'ezie. Na 2012, ọ kwụsịrị ọrụ ya dị ka ndị na-ahụ maka ire ahịa mba ụwa wee kpebie ime ụda dị iche. Mgbe […]
Ònye na-echeta ihe nkiri sitere na trilogy film 'The Matrix' site na 1999 nke onye ọ bụla na-agafe agafe nwere ike ịgbanwe na mberede na 'onye ọrụ ahụ'? Kemgbe ụbọchị m malitere ide, nnukwu mgbasa ozi amalitela ime ka m bụrụ oji. Nke a gosipụtara onwe ya na peeji nke niile na-akọwapụta banyere m na [...]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 July 2020	• 5 Comments
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 July 2020	• 16 Comments
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 July 2020	• 8 Comments
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 June 2020	• 6 Comments
Kedu ihe Black Lives Matter, LGBTI na amanyere bụ iwu nke Covid-19 nwere? Na ngwụcha, ọ bụ banyere mgbanwe nke ndị mmadụ na nnọpụiche nwoke na nwanyị, agba, ụmụ mmadụ transhuman. Ka m kọwaa. Mechie eriri oche gị! Dika m siri kwuo, o doro anya nke ukwuu na ndị ọcha na - ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 June 2020	• 17 Comments
Ternyaahụ Akọwara m ngosipụta nke Sunday 21 June na The Hague. O nwere ike ịbụ na ị hụla ebe ihe onyonyo dị ebe a ma nwee ike ịchọpụta na a haziri ya nke ọma. You chọpụtala na ndị ọgba aghara sitere na egbe ndị uwe ojii. Ọ nwere ike na-arụ ụka na […]
Nleta ha: 4.256.597
Jack van Dijk op Etufuola agha? Ka ànyị ga-eteta ma mee ihe?
Marianne op Etufuola agha? Ka ànyị ga-eteta ma mee ihe?